Shira habashaan Afaan Oromoo irratti xaxamaa jiru hayyootni Oromummaa qaban mormaniiru | OromianEconomist
Shira habashaan Afaan Oromoo irratti xaxamaa jiru hayyootni Oromummaa qaban mormaniiru	August 20, 2018
1.	Tahir Kasim - August 20, 2018
Hayyoota dhaloota qube jirra!! nan sobe!! ammalee nin jirra!! galanni isaanif hata’u warraa wareegamanif wanjoo garbummaa bachuu dadhabanii lubbuu isaani itti gabbaranif… nin dadhabee immimman….
2.	OromianEconomist - August 25, 2018
Imaammata Barnootaa waliin walqabatee Oromoof kan fayyadu Afaan ofii dagaagfachuu fi isaan cinatti ijoollee ofii afaan Ingilizii barsiisuu dha. Mallasaa Dirribsaa akka nama dhuunfaa tokkootti akka kanatti yaada.
1ffaa. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuu dha. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa taanaan waanti daa’imman Oromoo Afaan Amaaraa akka barataniif dhiphifaman hin jiru. Sadarkaa federaalaatti yoo afaan Oromoo fayyadamuun danda’ame, naannoo Oromiyaa biyya Itoophiyaa keessatti geopolitically bal’aa fi bakka murteessaa ta’e keessa hanga Oromoo harka guddaan jiraatutti, naannoo Oromiyaan alas bakka Oromoon heddumminaan jiraatutti afaan Oromoo afaan bal’inaan dubbatamu hanga ta’etti wanti daa’imman afaan Amaaraa barsiisuun dhiphisaniif hin jiru. Wanti resource heddu kanaaf baasaniif natti hin mul’atu. Kanaafuu Afaan Amaaraa barsiisuu caalaa Afaan Oromoo saffisaan Afaan federaalaa gochuu irratti xiyyeeffadhaa. Mentality dogoggoraa hunda caalaa afaan Amaaraa very crucial jedhamee jiru amma qabannee deemnetti afaan Oromoo otuma afaan hojii mootummaa federaalaa ta’eeyyuu qabatamaatti active akka hin taane godha. Jalqaba ilaalcha dogoggoraa kana keessaa bahuu gaafata.
2ffaa Amma addunyaan ganda tokko taatee jirti. Kana keessattis afaanota ijoo addunyaa keessattuu afaan Ingilizii beekuun Oromoof dhimma murteessaa dha. Biyya keessatti bakka Afaan Amaaraa Afaan Oromoo buusuun ni danda’ama. Sadarkaa addunyaatti ammaaf afaan Ingilizii afaan Oromoo sadarkaa bakka buusuun danda’amu irra hin jirru. Kanaaf afaan Ingilizii beekuun dirqama ta’a. Kanaaf immoo Ijoolleen Oromoo afaan Oromootti aansee kan sirriitti beekuu qaban afaan ingiliziiti. Kana milkeessuuf waanti godhamuu qabu afaan Oromoo gara kutaa 6tti gadi deebisuu miti. Afaan Oromo daran olguddisaa afaan ingiliziis akkamitti cinaadhaan ijoollee keenya barsiifna jedhanii qorachuu dha falli isaa. Fakkeenyaaf yeroo fi resource afaan Amaaraa barsiisuuf bahu gara afaan ingiliziitti deebisuu dha. Ijoollee grammar qofaa barsiisuu irratti xiyyeeffachuu keessaa bahuu dha. Kutaa 1ffaa irraa jalqabee spoken English akka subject tokkotti barsiisaa subject English language kan biraa dabalataa yoo xiqqaate subject 2 dandeettii afaan Ingilizii dubbachuu, dhagahuu, barreessuu fi dubbisuu cimsan ilmaan Oromoo akka baratan gochuu feesisa. Kun kan gargaaru 1. Ijoolleen afaan heddu(kan Amaaraa fi Ingilizii) baruuf yeruma tokko dhiphatuu dhiiftee tokkotti(Ingiliziitti) xiyyeeffattee isa sirriitti akka bartuu fi fluent taatu gargaara. Lamaan isaa erga tokko barsiiisuuf yaaluun lamaanuu sirriitti akka hin barre carraan gochuu isaas guddaa dha. 2. Afaan ingiliziif xiyyeeffannaa guddaa kennuun subject Afaan ingilizii garaagaraa spoken, grammar gargar baasanii kutaa 1ffaa irraa jalqabanii subject addaa addaan akka baratan gochuuf gargaara. Kan sanaan achii gosoonni barnootaa kanneen akka fiiziksii, ji’oogiraafii, herrega, seenaa fi kkf hanga kutaa 8tti afaanuma Oromoon itti fufuu qaban. Mallasaa Dirribsaa muuxannoo qabu irraa ka’ee kana recommend godha.